musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI Vatambi Vanotamba Yevatambi Eberechi Eze Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yakapedzisira Kugadziriswa pane June 15, 2020
Chinyorwa chedu chinokupa chinyorwa chizere cheEberechi Eze Childhood Nyaya, Biography Chokwadi, Hupenyu hwemhuri, Vabereki, Upenyu hwepakutanga, Mararamiro, Musikana, Hupenyu hwepamwe uye zvimwe zviitiko zvakakurumbira kubva paakanga ari mwana kusvika pakuzivikanwa kwazvo.
Hupenyu nekusimuka kwaEberechi Eze. Mifananidzo Credits: Instagram.
Ehe, munhu wese anoziva nezve ake akasimba maitiro ekutamba uye hunyanzvi hunyanzvi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanoona yedu vhezheni yeEberechi Eze's Bio iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Eberechi Eze's Childhood Nyaya:
Eberechi Oluchi Eze akazvarwa pazuva 29th raJune 1998 kunzvimbo yeGreenwich yeSouth East London, England. Iye mumwe wevashoma pane vatatu vana vanozvarwa nevabereki vasina kunyanya kuzivikanwa panguva yekuisa biography yake.
Nekuda kwenzvimbo yake yekuzvarwa uye ruvara, Eze ndiAnglo-Africa yeEast-Nigeria dzinza uye madzitateguru. Kunge Chris Smalling, yavo vaviri mhuri mune imwecheteyo London nzvimbo. Eze Eberechi akakurira munzvimbo imwe chete padyo nehama mbiri - Chima naIkechi - vanogona kunge vari vakuru kana vadiki kwaari.
Wechidiki Eberechi Eze akarererwa muguta reLondon. Cred: IG uye WorldAtlas.
Kukura mune imwe yemafati ari padyo nekare muchipatara cheGreenwich muguta guru reEngland, mudiki Eze aive mudiki mwana wetsiva uyo akatamba nhabvu semutambo wevacheche kuzvikonzero zvekunakidzwa nekutiza.
Kutanga nekupukunyuka, iyo nzvimbo iyo mhuri yaEberechi Eze yaigara uye kwaakakurira yakanga isiri nzvimbo yakanaka- kwete nekuda kwezvematsotsi. Yakanga ichingova nzvimbo iyo vabereki vake vanobva kune imwe nyika vekuNigeria vanogona kurarama mushure mekutamira kuEngland makore asati aberekwa. Kufanana nekutama kwakafanana kubva kumhuri yekuNigerian kwakabva, vabereki vaEzeya vaive vepasi yepakati-kirasi.
Hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezvevabereki vaEberechi Eze panguva yekuisa iyi bio. Mufananidzo Wekwereti: ClipArtStudio
Nekudaro, Eze akange asina kunyanya kuve sevana vazhinji vezera rake kutenderedza waaigara. Kunyange zvakadaro, achifara akawana zvikonzero zvakajairika nevana nekunamata nhabvu navo chero pamukana wakapihwa.
Eberechi Eze's Dzidzo uye Basa Rokuvaka:
Nzvimbo yekutanga iyo iyo yaimboshamwariswa nenhabvu nevamwe vake vaiwanzoenda mushure mechikoro yaive gomba riri padhuze apo vaitamba nhabvu kwemaawa akareba kusvika vabereki vavo vauya kuzovadaidza kuti vapinde.
Iyeye aimboita zvekurwa zvetsiva aiwanzo kutamba nhabvu neshamwari dzake mushure mekuchikoro. Cred: Pinterest.
Eze achiri ipapo, aiziva kuti aidzidzira hunyanzvi hwakakosha mumutambo waigona kumuitira zita. Iye aive zvakare akangwaririra nemikana yekutanga basa rekushingairira kuvaka mune chero mukurumbira ebhola rechikoro.
Eberechi Eze Makore Ekutanga muBhora:
Kana nguva yaive chaiyo, Eze akatanga kudzidzisa nevechidiki macomputer eArsenal asi akaburitswa mugore ra2011 nekuti iyo London London kirabhu haina kuona uyo aive mudiki wemakore gumi nematatu setariro yakajeka. Nepo Arsenal yakamuramba, ivo vakabvuma Eddie Nketiah, imwezve rejectee kubva kuChelsea vavaiona kunge iri nani.
Kuramba kunorwadza, asi hazvifanirwe kumurambidza. Sezvaitarisirwa, vabereki vaEberechi Eze uye nhengo dzemhuri vakaita zvese zvavaigona kuti vabatsire Eze kugara akasimba mupfungwa panguva iyi.
Kunyangwe kubvisa iko kwakaita kuti Eze ave nerima kwechinguva, akakwanisa kuzvitora nekuchengetedza nzvimbo kuFulham academy kwaakatanga kunakidzwa nhabvu zvakare. Akazotevera basa rekutanga basa rakaona Eze achiwana mutsara wemwedzi mina ku Read FC asati abatana neMillwall FC semakore gumi nematanhatu mugore ra4.
Mufananidzo usingawanzoiti weari kutamba Millwall FC Image Chikwereti: Instagram.
Eberechi Eze's Biography - Road To Fame Nyaya:
Wakanga uchiziva here kuti Ezeve akaburitswa kubva kuMillwall FC paakango funga kuti ramangwana rake nekirabhu yaivimbisa kutungamira nenzira kwayo? Zvakare, izvi zvinosiririsa zvakaitika uye zvinoshungurudza kumudiki. Chero chero mudiki wenhabvu akararama kuburikidza nekuburitswa kwete kamwe chete asi kaviri achanyatsoziva chete zvakadzama kurwadziwa kwakadzama kwaanogona kukonzera.
Kuwana demo kubva kuMillwall FC kwakadzosa ndangariro dzinoshungurudza nezvekusunungurwa kwake kubva kuArsenal uye kwakamuita kuti afare. Mufananidzo: Chinangwa.
Kutevera kushamisika kwake kusunungurwa naMillwall, Eze nenzira inoshungurudza akaudza vabereki vake nenhengo dzemhuri kuti arege nhabvu. Akafunga nezve kutora basa renguva pfupi kuTesco pamwe nekuenderera mberi nezvidzidzo zvake mukoreji asi akakurumidza kufona kuti abatane naQueens Park Rangers (QPR).
Kumufaro wake, vabereki nenhengo dzemhuri, QPR yakava nyaradzo kune chake chaitambudzika. Eze ane makore gumi nemasere akagamuchira mukana wekutamba zvakare nekusaina chibvumirano chake chekutanga nekirabhu muna Nyamavhuvhu 18. Kune kwavo, QPR yakapa Eze mukana wekuratidza tarenda rake nekusimudzira hunyanzvi hwake zvinosanganisira kumutumira kuWycombe Wanderers nechikwereti. muna 2016.
Eberechi Eze's Biography - Rise To Fame Nyaya:
Paakapedza chikwereti chake chegore rimwe chakanakisa, Eze akaunzwa kubhuji revabereki vake uko akaita zvakanaka kuchengetedza chinzvimbo chake semukundi. Nekukurumidza kumberi kwe2020, Eze ndiye winger uyo maneja weQPR akavaka timu yake kutenderera.
Nhabvu weNigerian Mhuri Yekutanga haasati ari pedyo nekufungidzirwa kukwikwidza vakuru varume bhora nhabvu. Nekudaro, ari kushanya mutsetse wekuva chimwe chezvipikirwa zvakanakisa zveEngland kunhabvu.
Fambiro mberi parizvino iri pane radar yezvikwata zvepamusoro zveEurope apo England neNigeria vari kuita mafambiro ekuchengetedza siginecha yake yebasa repasi rose. Nigeria ine tariro yekuti mukomana uyu airidza Super Eagles. Izvi zvinosanganisira kutevera nzira yeEngland homegrown players seSone Aluko, Victor Moses, Shola Ameobi, Alex Iwobi naOla Aina.
Musikana waEberechi Eze- musikana iye asina kuroora kana kuroora?
Kuenderera mberi kune Eze Eberechi hupenyu hwehupenyu, hatingatauri zvachose kutaura kuti haana kuroora. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nenyaya yekuti mapikicha maviri ari paiyo winger's Instagram peji anoratidza kuti ane kasikana anozivikanwa musikana.
Musikana waEze Eberechi haangotarise senge munhu ane midzi yeAfrica asi anorova vateveri semutambo wakakwana weanonakidza winger. Isu tinonyatsotarisira kuti duo vari kufambidzana uye vane zvirongwa zvakakura zveramangwana.
Mifananidzo mitsva yaEberechi Eze nemusikana wake anozivikanwa. Kwayaka: Instagram.
Eberechi Eze Hupenyu hwemhuri:
Mhuri yave iri mubhedha wekufamba kwaEzeze munhabvu kubva paupenyu hwake hwepakutanga kusvika nhasi. Muchikamu chino, tinokanda mwenje wakawanda pavabereki vaEberechi Eze uye nhengo dzemhuri.
About Eberechi Eze Baba naamai:
Eze achiri kuzarura kuzivikanwa kwevabereki vake veNigeria asi isu tinoziva kuti ivo vanofarira nhabvu uye vanotsigira vabereki. Asi izvo, winger akapa chikwereti kuna amai vake kuti amunyaradze mushure mekubvisa kwake kusarudzika kubva kuArsenal academy.
Ukuwo Nhabvu Federation yeNigeria - mukupera kwa 2019 - vanoti vari kukurukura nababa naamai vaEzeza nechinangwa chekuti vachengetedze siginecha yavo pabasa rekuda. Nhaurirano dzinotaura zvakawanda nezvekubatanidzwa kwevabereki vaEze muhupenyu hwake hwebasa.
About Eberechi Eze's siblings uye hama:
Iyo winger inozivikanwa kuva nevanun'una vaviri. Ivo ihama dzake Ikechi naChima. Ikechi mutambi wenhabvu anoridzira Braintree Town nhabvu nhabvu (saApril 2020). Kune rake, Chima anotaridzika saEzeze. Ane zvaanofarira mune fashoni uye online kutenga.
Eberechi Eze aine vakoma vake Ikechi (kuruboshwe) naChima (kurudyi). Kwayaka: Instagram.
Kure kure neupenyu hwemhuri hwaEzeya, kwete zvakawanda zvinozivikanwa pamusoro pemadzitateguru ake uye nemhuri yake mabviro kunyanya maererano nehukama hwake nasekuru naamai vake nasekuru vake. Zvimwechetezvo, hapana marekodhi ewababamunini vaEze, babamunini uye hama dzemumba uye mwana wemuzukuru wake achiri kuzivikanwa.
Eberechi Eze's Life Life:
Kure nehunhu hwake, Eberechi Eze anomiririra hunhu hunosanganisira kusimba, manzwiro ehungwaru uye hunhu hwekuseka. Mukuwedzera, iye anoziva nzira yekunyatsoenzanisa chinzvimbo nemafungiro akanaka.
Iyo inotyisa winger ine Zodiac Sign iyo Kenza haigone kuburitswa zvakanangana nehupenyu hwake hwepachivande uye hwega. Mabasa anoita zvinhu zvake nezvaanofarira kuita zvinosanganisira kuona mabhaisikopo, kuteerera mimhanzi, kutamba mitambo yemavhidhiyo uye kupedza nguva yakanaka nemhuri uye neshamwari.
Tarisa uone imwe yemashoma eboka emitambo anofarira mimhanzi asina kuvhara maziso avo. Kwayaka: Instagram.
Nezve maitiro Eze Eberechi uye anoshandisa mari yake, ane mari inofungidzirwa inodarika mamirioni emadhora panguva yekunyora iyi bio. Kupa hova pamutero wewinger kunosanganisira mibairo nemubairo waanotambira wekutamba nhabvu yechikwata chekutanga.
Iye anopfuura $ 1 miriyoni (2020 nhamba) kunyora iyi bio. Mufananidzo: Instagram uye Photofunia.
Uye zvakare, endorsements nemhando yakaita seAdidas inoita zvakawanda kukurudzira hupfumi hwaEze. Saka nekudaro, haasi mutorwa kune mafaro ehupenyu ayo anosanganisira kufamba munzira dzeLondon nemotokari dzinotyisa pamwe nekugara mudzimba dzakanaka.
Eberechi Eze's Chokwadi:
Kuunza kugumisa kune yedu Eberechi Eze's bio, heano mashoma anozivikanwa kana Untold chokwadi nezve winger.
Chokwadi # 1 - Mari Yemubhadharo
Musi wa3 Nyamavhuvhu 2016, wepamberi akasaina chibvumirano neQPR, icho chakamuona achiwana muhoro wegumi nemakumi matatu nemakumi matatu nemakumi matatu nemakumi matatu nemakumi mairi nemakumi mairi nemairi (273,000 maEuro) pagore. Kumedura muhoro wake kuita zvidiki, zvinoreva kuti anotambira zvinotevera.
Negore: £ 273,000 € 313,051
Pamwedzi: £ 22,750 € 26,088
Pa Vhiki: £ 5,291 € 6,067
Pazuva: £ 756 € 867
Per Awa: £ 32 € 36
Per Minute: £ 0.53 € 0.6
Per Seconds: £ 0.008 € 0.01
Eberechi Eze Salary kuputsa
Izvi ndizvo EBERECHI EZE akawana kubva pawakatanga kuona peji ino.
Kana izvo zvaunoona pamusoro zvikaverenga (0), zvinoreva kuti uri kuona peji AMP. NON-AMP mapeji aizoona muhoro wake zvichikwira pane wechipiri anotambira.
Waizviziva here? A average UK mugari anowana £ 2,830 pamwedzi zvaizoda kushanda kwemwedzi misere kuti uwane £ 22,750 iyo ndiyo mari yaanowana Eze mumwedzi.
Chokwadi # 2 - Fifa Nzvimbo:
Eze ane yakazara FIFA muyero yezvikamu makumi manomwe neshanu. Iwo murombo ratidziro ndeyenguva pfupi muchiedza chekukura uye yakanaka fomu iyo iyo winger yave ichiratidzira munguva pfupi yapfuura. Nekudaro, its chete nyaya yenguva vateveri vasati vaona Eze azadzisa kugona kwake kwemakumi masere nematanhatu mapoinzi.
Pasina mubvunzo, Eberechi Eze's SoFIFA maseko (nhamba yeFIFA makumi maviri) anoratidza iye pamwe netauro- dzinofarira Samuel Chukwueze, Boubakary Somare uye Curtis Jones vatambi venguva yemberi.
Izvo zvakakodzera kutaura kuti uku ndiko kutanga kwake kwekuzvininipisa. Mufananidzo: SoFIFA.
Iye anokunda achiri kusiya mashongedzo ezvinei kana iye ari mutendi kana kwete. Nekudaro, kusawirirana kuri mukuda kwevabereki vaEberechi Eze vachimurera kuti ave mutendi anoita chiKristu. Chitendero ichi chakanyanya kufanana nekubviswa kwaIgbo weSouth Eastern Nigeria uko Eze ane mhuri yake.
Chokwadi # 3 - Pets:
Kufanana nevakawanda venhabvu, Eze yakakura pakuchengeta mhuka dzinovarairwa kunyanya imbwa. Ane imbwa isingadhuri imbwa iyo yaanowanzo tora Instagram yakakodzera mafoto ayo vateveri vanoyemura. Ona imwe yemifananidzo yakanaka pazasi.
Ndokumbirawo ubvunze mutambi kana mubereki wake muvhi chero paunoona imbwa inofamba inoratidzika seiyi muLondon. IG.
Chokwadi # 4 Tattoos:
Eze haana ma tattoos kana muviri muviri - panguva ino - nekuti anovaona sekuwedzera kusakosha. Ari arikushandira kuti ave neakavaka muviri wakanaka zvinoenderana nekureba kwake kwemamita mashanu nemasendimita.
Chokwadi # 5 Trivia:
Wakanga uchiziva here kuti gore rekuzvarwa kwaEzeze - 1998 rinozivikanwa nekuve iro gore iro rekutsvaga injini Google rakavambwa? Pane yevaraidzo chiitiko, 1998 akaona kuburitsa mafirimu akakurumbira seTitanic uye Kuchengetedza Yakasarudzika Ryan.
Zvimwe zvekuvhura uye kuburitsa izvo zvakaita kuti gore ra 1998 rive rinonakidza. Google uye IMDB.
Kubata chibharo chokwadi chedu, tinokupa iwe Eberechi Eze's wiki. Iri tafura raizokubatsira kutora nekukurumidza uye nepfupi ruzivo rwemutambi wenhabvu.
Zita rizere: Eberechi Oluchi Eze.
Musi wekuzvarwa: 29 June 1998 (makore 21).
Nzvimbo yekuzvarirwa: Greenwich, England.
Vabereki: Mr naAmai Eze.
Vanun'una: Ikechi naChima (hama).
Kwakavambwa Kwemhuri / midzi: Madzitateguru eNigeria.
Nhau Yebhola: Millwall.
kukwirira: 5 ft 8 in (1.73 m).
FIFA Inogona: 83 (FIFA 20).
Eze Eberechi's Wiki data
CHOKWADI KUTI: Tinokutendai nekutora nguva yekuverenga yedu vhezheni yeEberechi Eze's nyaya yehudiki -kusanganisira ake biography chokwadi. PaLifeBogger, isu tinogara tichiedza kuitira uye nekuita zvakanaka. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisiri kutaridzika mune ino chinyorwa, tapota isa mhinduro yako kana kutibata nesu.
Phil Jones Childhood Nyaya Yekuwedzera Untold Biography Facts